Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » South Korea njem njem » Ndị ụgbọ elu Korea na-atụ anya inweta uru na nkeji iri na ise a
Las Vegas nke jikọtara ụgbọelu Las Vegas ga-adaba na LAX maka ụjọ coronavirus
Ọ bụghị ndị njem niile maka ụgbọ elu. Nke a bụ eziokwu maka ụgbọ elu ụgbọelu South Korea ụgbọelu.
A na-atụ anya na ụgbọelu ahụ ga-enweta uru na nkeji mbụ nke 2021
Korean Air Lines Co. ga-efegharị na ojii na nkeji iri na ise nke afọ a.
Nke a dị ịtụnanya, e wepụtara data na Sọnde, ka ụlọ ọrụ ahụ gbasaa ọrụ ya na lọjistik mgbe ọrịa coronavirus ọhụrụ a kwụsịtụrụ njem njem.
Linegbọ elu a na South Korea na-atụ anya itinye uru ọrụ nke ruru ijeri 76.6 ($ 68.3) maka ọnwa Jenụwarị-Machị.
A na-eme atụmatụ na ire ere belatara pacenti iri abụọ na isii n'ogologo ahụ wee baa mba ijeri 26.
Ndi ụgbọ elu Korea nwere ọnwụ nke ijeri 82.3 meriri otu afọ gara aga, dị ka nghoputa nke Yonhap Infomax wepụtara, ogwe aka nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Yonhap
Ọrụ siri ike nke azụmaahịa Korea Air na-atụnye ụtụ na ịga nke a.
"Onu ogugu nke edozi site na Korea Air ruru onu ogugu di elu na onwa gara aga," NH Investment & Securities Co. kwuru na akuko ya. “Ọgba aghara a na-eme na Suez Canal mere ka ndị mmadụ chọkwuo ọrụ ụgbọ mmiri.”
Star Alliance Member Asiana Airlines Inc., nke na-echere njikọta ya na onye ya na ya na-azọ ọkpọ Korea Air, a na-atụ anya izipu uru na nkeji nke mbụ, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga tufuru ijeri 70.3.